अभय पाण्डे काठमाडौं, १० चैत
एक पटक एक जना विद्वान् प्रोफेसर समुद्रको सयरमा निस्केछन् । सयर गर्दागर्दै उनको ध्यान त्यो डुंगाको नाविकमा टिकेछ । उनलाई त्यो नाविकप्रति कौतूहल जागेपछि प्रश्न गर्न थालेछन् ।
२ जनाबीचको सम्वाद यस्तो भएछ :
प्रोफेसर : तपाईंलाई इतिहास कतिको आउँछ ?
नाविक : अहँ ! पटक्कै आउँदैन ।
प्रोफेसर (लामो सास फेर्दै) : आउँदैन ? तपाईंको त एक चौथाइ जिन्दगी खेर गएछ । भूगोल त आउँछ होला ?
नाविक : अहँ ! त्यो पनि आउँदैन ।
प्रोफेसर : ए, त्यसो भए आधा जिन्दगी खेर गएछ । समुद्री विज्ञान त आउँछ होला नि ?
नाविक : त्यो पनि आउँदैन ।
प्रोफेसर : तपाईंको त तीन चौथाइ जिन्दगी खेर गएछ ।
त्यतिकैमा ठूलो आँधी आउँछ । नाविकले प्रोफेसरलाई सोध्छ : तपाईंलाई पौडी खेल्न आउँछ ?
प्रोफेसरले आउँदैन भनेर जवाफ दिएछ ।
नाविकले रुन्चे स्वरमा भनेछ : प्रोफेसर सा ब, तपाईंको पूरै जिन्दगी खेर गएछ ।
हामीले आफूलाई राजनीतिको जति नै ठूलो प्रोफेसर ठाने पनि, कोरोनाको आँधी चलेको बेला जान्नुपर्ने राजनीति होइन, हात कसरी धुने भन्ने पो रहेछ !
हामीमध्ये कतिलाई राम्रोसँग हात धुन आउँछ कुन्नि ? तल राखिएको लिङ्कमा क्लिक गरी एक पटक राम्रोसँग हेर्नु होला । कोरोनाको आँधी चलेको बेला जोड्नुपर्ने धन होइन, मास्क, साबुन, ग्लोव्स र स्यानिटाइजर पो रहेछ ! जिउन चाहिने आधारभूत ज्ञान र आवश्यकता के रहेछ ? अहिले हामी राम्रोसँग बुझ्दै छौँ ।
लिङ्क : https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
केही दिनअघि मात्र डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले माइक अगाडि चिच्याईचिच्याई सरकारलाई गाली गर्नुभन्दा हात कसरी धुने भन्ने कुराको प्रयोगात्मक ज्ञान दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? कोरोना भित्रिइसकेको भए पनि त्यसबाट बच्न मद्दत मिल्थ्यो होला ।
मिडियाले पनि उनलाई हात धुन सिकाउन अनुरोध गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला । तर, त्यतिबेला हामीलाई आधारभूत ज्ञानसँग के लिनु दिनु थियो र ? हामीलाई त ठूलाठूला कुरा जान्नु थियो, सिकाउनुपर्ने थियो । जिन्दगीमा आँधी चलेको बेला सुन्नुपर्ने नाविकलाई हो ।
अहिले हाम्रो नाविक भनेको सरकार हो । अहिले सरकारलाई सुन्ने बेला हो । कबाडी अनलाइन र बकम्फुसे भाइरलेलाई सुन्ने बेला होइन । अहिले सरकारलाई सहयोग गर्ने बेला हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा सबैले थाहा पाइसकेको जानकारी आदानप्रदान गरेर, पेज ओभरलोड गर्ने बेला पनि होइन ।
अहिले सम्बन्धित निकायले जारी गर्ने नयाँ सूचना मात्र आदानप्रदान गर्ने बेला हो । त्यसै पनि संसारका धेरै समस्या ज्ञानको कमी भएर उब्जिएका होइनन् । व्यवहारको कमीले उब्जिएका हुन् । त्यसैले अब व्यवहारमा उत्रने बेला हो । अहिले हात धुन, सामाजिक दूरी राख्न सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने बेला हो ।
स्मरण रहोस् , भाइररस तपाईं आफैँबाट आफूलाई सर्ने होइन अरूबाट तपाईंलाई सर्ने हो । त्यसैले आफू जोगिन पनि अरूलाई सिकाउने बेला हो । अहिले सफा पानीले भरिएको बाल्टिन र साबुन बोकेर बाटोमा हिँड्ने मानिसलाई हात धुन सिकाउने बेला हो ।
अहिले संसारलाई नमस्ते हामीले सिकाएको भनेर दंग पर्ने बेला पनि होइन । नमस्ते गर्ने भारतलाई पनि कोरोनाले नछाडेको त सबैलाई थाहा नै छ । यो अन्धविश्वासलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने बेला हो । अहिले आफू हिन्दू भएकोमा गर्वबोध गर्ने बेला पनि होइन । अहिले हिन्दु हुनुको धर्मबोध गर्ने बेला हो । आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने बेला हो ।
लन्डनमा बस्ने एक जना मित्र भन्दै थिए, कसरी लन्डनमा युवाहरू आफ्नो समुदायमा स्वयंसेवक समूह गठन गरेर छरछिमेकमा रहेका बुढाबुढीहरूको ढोकाढोकामा गई कुशल मंगल सोध्छन्, उनीहरूलाई चाहिने औषधि-पानी ओसार्ने काम गर्छन भनेर । हामी सामाजिक दूरी राखौँ भनेर घरमा बसिरहेका बेला केही स्वयंसेवी युवाहरू बेलैया नाकामा नेपाल भित्रिने मानिसहरूको ज्वरो जाँच गर्न सरकारी अधिकारिहरूलाई सघाउँदै छन् भन्ने खबर पनि पढ्न पाइयो । यी युवाहरूलाई आफ्नो धर्मको ज्ञान कति छ कुन्नि ? तर, यिनीहरू लोभलाग्दो रूपमा आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै छन् ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा गम्भीरता प्रदर्शन गर्ने बेला पनि होइन । तपाईंको गम्भीरताले कोरोनामा कुनै प्रभाव पार्नेवाला छैन । तपाईंको सजगताले मात्र प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले अहिले सजग हुने बेला हो । अहिले कोरोनासँग डराउने बेला पनि होइन, सामअूहिक रूपमा लड्ने बेला हो ।
अहिले कोरोनाविरुद्ध हात उठाउने र कम्तीमा पनि २० सेकन्डसम्म कोरोनाको राम धुलाइ गर्ने बेला हो । अहिले डराउने बेला पनि होइन । डर कोरोनाभन्दा धेरै चाँडै फैलिन्छ । याद राखौँ, डर र हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीको सोझो सम्बन्ध हुन्छ ।
डरबाट उत्पन्न्न हुने तनावले शरीरको त्यो तत्त्वको मात्रा कम गर्छ, जुन तत्त्व भाइरससँग लड्छ । त्यसैले अहिले हँसी मजाक गर्ने बेला हो । आफू पनि हाँस्ने अनि घरका सदस्य, विशेष गरेर बुढाबुढीलाई हँसाउने बेला हो । बुढाबुढी अहिले सबैभन्दा चिन्तित छन् । हँसी मजाकले तनाव कम गर्ने मात्र होइन, रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई पनि मजबुत राख्न मद्दत गर्छ ।
अहिले सामाजिक दूरी राख्ने बेला हो, भावनात्मक दूरी राख्ने बेला होइन । सक्नेले अरूलाई मद्दत गर्ने बेला हो । हामी सबै एक किसिमको सङ्कटको घडीमा छौँ । अहिले हरसङ्कटको एक दिन अन्त्य हुनै पर्छ भन्ने शाश्वत ज्ञानलाई आत्सात् गर्ने बेला हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, १० चैत २०७६, ०६:४१:००
सुदूरपश्चिममा ६० वर्षमाथिका दिर्घरोगीको पीसीआर गरिने
कोभिडमा लापरबाही : अब जरिमाना होइन, सीधै कैद